“Waxaan iska diiday kooxaha Real Madrid iyo Chelsea sababa la xiriira Juventus”… Massimiliano Allegri – Gool FM
(Juventus) 13 Juunyo 2018. Macalinka kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa wuxuua xaqiijiyay inuu iska diiday dalabyo uu ka helay kooxaha Real Madrid iyo Chelsea, sababa la xiriira inuu doonayay inuu iska sii joogo Bianconeri.
Massimiliano Allegri ayaa u sheegay wargeyska “Football Italia” ee dalka talyaaniga in uu xiriir lasoo sameeyay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez si uu ula saxiixdo.
“Madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa mar ila soo xariiray si aan u leeliyo Los Blancos laakiin waxaan u sheegay inaan sii joogayo Juventus, maadaama aan ixtiraam buuxa u hayo kooxda Juventus iyo madaxweynaheeda Andrea Agnelli”.
“Andrea Agnelli waxaan u sheegay inaan kusii sugnaan doono kooxda, hadii aan doonayo inaan kooxda ka dhaqaaqo in uu noqon doono qofka ugu horeeya aan u sheegi doono”.
Si kastaba Massimiliano Allegri ayaa wuxuu qeyb ka ahaa macalimiinta ugu cad cadaa ee lala xiriirinayay inay noqon doonaan badalka Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid, kahor inta aanan loo magacaabin Julen Lopetegui, halka wali Antonio Conte uu baaqi ku yahay Chelsea.
SAWIRRO: Liverpool oo soo bandhigtay Maaliyadaha ay ku ciyaari doonto Kulamada Bannaanka ee 2018-19